SomaliTalk.com » Warsaxaafadeed: Ra’iisul Wasaaraha oo cambaareeyey weerarkii Beledweyne, tacsina u diray dadkii ku geeriyooday
Warsaxaafadeed: Ra’iisul Wasaaraha oo cambaareeyey weerarkii Beledweyne, tacsina u diray dadkii ku geeriyooday
iyo Ra’iisul Wasaaraha oo la kulmay wafdi ka socday OIC iyo hay’ad laga leeyahay dalka Sucuudiga
iyo Madaxweyne Xasan oo yiri “Dowladda waxaa ka go’an in la cirib tiro Al-Shabaab.”
Muqdisho, November 19, 2013—-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii fuleynimo ee lagu qaaday saldhigga degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
“Kooxaha nabadiidku waxay mar kasta dhibaatada ugu badan u geystaan shacabka, mana ka daalayaan daadinta dhiiga shacabka” ayuu mar kale yiri Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Cabdi Faarax Shirdoon.
Madaxweyne Xasan “Dowladda waxaa ka go’an in la cirib tiro Al-Shabaab.”
Muqdisho, 19 November 2013 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa tacsi u direy dhammaan dadkii waxyeelada ka soo gaartey qaraxii maanta ka dhacay saldhiga Booliiska ee Beledweyne.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa yiri “ Waxaan tacsi u dirayaa dhammaan inta waxyeeladu ka soo gaareen qaraxii maanta. Waxaa dhammaan shacabka ugu baaqayaa inaysan ka niyad jabin oo aysan rumeysan argagaxa ay wadaan kooxahan nabad-diidka ah. Al-Shabaab bacdamaa looga adkaaday dagaalka ayaa waxey ka badin la’yihiin inay shacabka laayaan oo ay geliyaan argagax iyo cabsi joogta ah. Dowladda waxaa ka go’an inay dalka ka cirib-tirto kooxahan shacabka Soomaaliyeed ka hortaagan nabadda iyo horumarka.”
Abdirahman Omar Osman (Eng. Yarisow), Senior Advisor & Spokesperson, Office of the President of Somalia, yarisow@presidency.gov.so, media@presidency.gov.so, +252615479911
Ra’iisul Wasaaraha oo la kulmay wafdi ka socday OIC iyo hay’ad laga leeyahay dalka Sucuudiga
Muqdisho, November 19, 2013—-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid”, ayaa xafiiskiisa kula kulmay wafdi ka socday ururka Islaamka iyo hay’ad lagu magacaabo Al Raya International, waxayna wafdigani uga warbixiyeen Ra’iisul Wasaaraha qodista ceelel biyood gaarayay 50 oo ay ka qodeen gobolada bartamaha iyo koofurta Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Cabdi Faarax Shirdoon ayaa isna uga mahadceliyay wafdigan howsha baaxada leh ee ay ka wadaan dalka, isaga oo kula taliyay in si deg deg ah ay u bilaabaan wajiga labaad ee qodista ceelashan, maadaaba buu yiri baahi weyn ay u qabaan dadka ku dhaqan gobolada helista biyo.